यो एक किसिमको यौनरोग हो - यौन मनोविज्ञान - साप्ताहिक
यो एक किसिमको यौनरोग हो
मेरी श्रीमतीको योनिमा सानो मासु पलाएजस्तो भएको छ, जुन हल्का रातो रंगको छ । के कारणले यस्तो भएको हो र त्यसका लागि हामीले के गर्नुपर्छ ? पहिले–पहिले त्यो चिलाउँथ्यो, अहिलेचाहिं चिलाउँदैन । यसलाई कसरी हटाउने ?
योनिमार्गमा चिलाउने सानो मासुको डल्ला मुसा (जेनाइटल वार्ट) आउन सक्छ तर नहेरी यसै भन्न सकिँदैन । जेनाइटल वार्ट एक किसिमको भाइरस (ह्युम्यान पापिलोमा भाइरस) ले हुन्छ ।
यो एक किसिमको यौनरोग हो । यसको उपचार सम्भव भएकाले आत्तिनु पर्दैन । तपाईले एकपटक आफ्नी श्रीमतीको परीक्षण छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञबाट गराउनुपर्छ ।
शुक्रकीट बाहिर फाल्दा पनि बच्चा बस्छ